Telegram for Mac dia novaina ho amin'ny andiany 8.0 | Avy amin'ny mac aho
Ny kinova farany azo zahana amin'ny fampiharana Telegram ho an'ny mpampiasa Mac dia ny kinova 8.0 ary ao anatin'izany dia misy fanovana sy zava-baovao marobe ampiana, toy ny fahatongavan'ny ony mivantana tsy voafetra, ny fandefasana hafatra amin'ny fomba tsotra na ny safidy hifanakalo eo anelanelan'ny fantsona amin'ny fomba tsotra.
Ny marina dia telegramana mihoatra ny maha-fampiharana fandefasan-kafatra tsotra ary manampy antsipirihany bebe kokoa momba ny tambajotra sosialy. Mazava ho azy, ny fanatsarana mahazatra amin'ny fiasa sy ny fitoniana amin'ny fampiharana, noho izany dia manana kinova vaovao somary feno izahay.
Mazava ho azy, ireo fanatsarana sy fiasa vaovao ireo dia mety ho tena ilain'ny mpampiasa be mpampiasa indrindra, na dia marina aza fa mpampiasa maro no tsy manararaotra feno ireo fiasa arosony. Ohatra, ny safidy handefasana horonantsary mivantana miaraka amina mpampiasa tsy manam-petra dia tsy zavatra hampiasain'ny tsirairay, fa ny fahafahany manao resaka video miaraka amina vondrona na fantsona iray manontolo dia zavatra izay tsy avelan'ny fampiharana fandefasan-kafatra rehetra ataonao. Ataovy izany mpampiasa maro no nandeha tamin'ny fampiharana hafa nankany Telegram noho ny antony maro samihafa ary mihamaro ny mampiasa azy.
Mazava ho azy fa tsy ny zavatra rehetra ataon'ny Telegram dia tsara ary tsy izy no fampiharana tsara indrindra ho an'ny mpampiasa rehetra, fa azo antoka miaraka amin'ity fotoana ity sy miaraka amin'ny ny isan'ny fanavaozam-baovao sy ny fanatsarana avoakany dia nahatonga azy io ho anisan'ny tsara indrindra. Mety tsy mampiasa ny antsasaky ny tombony atolotra azy ianao raha ampitahaina amin'ny fampiharana hafa mitombina, fa manokana, noho ny safidy hampiasa azy io na amin'ny Mac na amin'ny fitaovana iOS, iPhone, iPad, sns., Efa mendrika ny hametrahana azy .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Telegram for Mac dia novaina ho amin'ny andiany 8.0
Hisokatra amin'ny 4 septambra ny fivarotana Apple Vaovao an'i Hunan
Shedeur Sanders, masoivohon'ny oniversite ho an'ny headphone Beats